Donald Trump oo u faanay Kim Jong-un - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka ptasha
Madaxweynaha Mareykanka Dnald Trump ayaa ku faanay in badhanka hubkiisa nukliyerka uu ka wayn yahay "kana awood badan yahay" midka hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un.
Farriinta Trump uu dhigay Twitter-ka waxay ka mid tahay tallaabooyiinkiisa ugu dambeeya ee xagjirnimada iyo kala fogaanta u dhexeysa huggaamiyayaasha hubka nukliyerka.
Kim ayaa horraantii isbuucan ku hanjabay in badhanka laga rido hubkiisa nukliyerka uu markasta "u saaran yahay miiskiisa".
Maalinta Trump waxay ku dhammaatay farriimo Twitter oo isdaba joog ahaa, sida in uu ku dhaawaqay ereyo ah "warbaahinta musuqa", iyo in uu ku hanjabo in kaalmada uu ka jarayo Falastiin oo uu ku eedeeyay "mahdin la'aan iyo xushmo daro".
Hadalkan ugu dambeeya ee Trump wuxuu caddeynayaa in madaxweyne kaste oo Mareykan ah uu si degdeg ah u helayo lambarada sirta ee nukliyerka, marka uu madaxweyne noqdo. Mareykanka wuxuu leeyahay hubka nukliyerka ugu wayn dunida.
Maamulka Kuuriyada Waqooyi wuxuu sheegay in uu haysto nukliyer, uuna weerari karo Mareykanka, balse dadka arrimaha hubka falanqeeya waxay sheegayaan in Pyongyang ay haysato nukliyer, balse aysan garan karin in uu leeyahay awood teknoloji ay u adeegsadaan.
Ereyada adag ee Twitter-ka uu ku qoro Trump iyo dhaqamadiisa waxaa la yaabay dadka akhrista. Shirkadda Twitter ayaa markale dib u qeexeysa waxa ay diblumaasiyad tahay ama hadalka madaxweyne uu noqon karo.
Dad badan oo internet-ka isticmaala waxay ka digayaan adeegsiga hanjabaadda nukliyer ee hoggaaamiyayaasha caalamka ay is dhaafsanayaan.
Laakiin taageerayaasha Trump way difaacayaan, waxayna sheegayaan in hadalkiisa uu yahay mid sax ah oo muujinaya awoodda Mareykanka.
Sikastaba, dad badan ee fikradahooda ku qoraya baraha bulshada waxay diiradda saarayaan wayninka badhanka uu ka hadlay Trump.
Xilligii ololaha doorashada, ninkii ay loolamayeen, Marco Rubio ayaa ka hadlay wayninka gacmaha Mr Trump.
Xilligaasi wuxuu Mr Trump ku adkeystay in "gacmihiisa uu ula jeeday" - "haddii ay yaryihiin, waxkalena waa in ay yaraadaan. waxaan kuu xaqiijinayaan in aysan dhib lahayn. waa hubaal", ayuu yiri.
Isku xirka arrimahaasi waxaa hadal haya dadka isticmaala baraha bulshada.
Illaa iyo hadda, caalamka wuxuu og yahay in badhanka ku yaalla miiska Trump uu yaahay midka uu sharaabka ku dalbado.
Kaasina waa midka ay marar badan ka warrameen warbaahinta Mareykanka oo ay ku sheegeen "badhanka shaqaaye" xilliga wareysiyada.
Labada hoggaamiye ee Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa marar badan isugu yeeray magacyo qallafsan.
Hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi wuxuu Trump ku tilmaamay "odey cajuus ah" halka Trump uu Kim ku magacaabay "ninka yar ee gantaalka ah".